वर्षाको वितण्डा: ६ जनाको मृत्यु, कहाँ के भयो ? - Kendrabindu Nepal Online News
वर्षाको वितण्डा: ६ जनाको मृत्यु, कहाँ के भयो ?
अविरल वर्षाको कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
बाढी पहिरो र चट्याङले गर्दा देशका पाल्पा, काठमाडौं, सुनसरी, महोत्तरी, सिन्धुली, रौतहट, पाँचथर, धनुषा, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायत जिल्लामा क्षति पुर्‍याएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ११ वटा जिल्लाहरुमा बढी क्षति पुगेको छ ।
काठमाडौं–२१, लगनमा ढुंगाले बनेको कच्ची घर वर्षाले भत्काएको छ । घरमा कोही नबकेको वेला घटना भएकाले क्षति नभएको जनाइएको छ । वर्षाले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पनि पर्खाल पनि भत्काएको छ ।
काभ्रेको बनेपा–३, नालामा भूकम्प पीडितको घरमाथि पहिरो खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र ७ वर्षीय सोहनी दंगाल छन् । घटनामा बुहारी ३० वर्षीया शुशिला र तीन महिने नातिनी अनुश्का घाइते छन् ।
रौतहटमा बाढी आउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द भएको छ भने पाल्पाको प्रभासमा सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–५ महालक्ष्मीमा पहिरो खस्दा आवतजावत बन्द भएको छ ।